चीनप्रति अमेरिकाको आक्रामक कदम, चिनियाँ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/चीनप्रति अमेरिकाको आक्रामक कदम, चिनियाँ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध !
काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीनविरुद्ध आक्रामक रुपमा उत्रिएका छन् । पछिल्लो पटक ट्रम्पले चिनियाँ एप टिक टकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका हुन् । ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेश जारी गरेर २४ घण्टाभित्र टिक टकलाई प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् ।
रोचक त के भने अमेरिकी कम्पनी माइक्रोसफटले टिक टक किन्ने तयारी गरिरहेको सीएनएनको समाचारमा जनाइएको छ । अमेरिकाकै कम्पनीले एक किन्ने तयारी गरिरहेका बेला ट्रम्पले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सले टिकटक बेच्न चाहेको र माइक्रोसफटले किन्न चाहेको रिपोर्ट आएको थियो ।
bracking news::भ’र्खरै आयो निकै दु”खद् खबर , पाकिस्तानी सेनाको ब’मबारीमा गोर्खा सैनिकको मृ”त्यु